Kufundwa okufishane ngempelasonto | Izincwadi Zamanje
Kukangaki sikhona kakhulu isikhathi esifushane futhi asikwazanga ukukhokhela ukunethezeka kokuma isikhathi eside sifunda incwadi enhle? Lokhu kuvame ukwenzeka ikakhulukazi phakathi kwezinhlobo ezimbili zabantu: abafundi abagcina begcwele izinhlamvu futhi abanesifiso esincane sokuqhubeka nokubuka izincwadi noma abasebenzi abagcina bekhathele ekugcineni kosuku futhi bengenawo amandla okuchitha imizuzu embalwa befunda incwadi ethatha uthuli etafuleni eliseduze kombhede.
Kungenzeka futhi ukuthi ungomunye walabo bantu abaminza i- "billet" futhi bakhetha ukufunda okuningi ukufundwa ehlukile kodwa "kunguqulo encishisiwe".
Noma ngabe ikuphi, namhlanje siphakamisa ukufundwa okuhlanu okuhluke kakhulu, okunokuthile okufana ngakho: kufushane kakhulu ukuthi ungakuqeda ngempelasonto efana naleyo esesizophela noma uma ungiphuthumisa, ngosuku olulodwa nje, kuya ngesifiso osithatha ngayo nokuthi yini oyithandayo ngesakhiwo sendaba.
Lezi yizo ukufundwa okufushane ngempelasonto ukuphumula okuhle esincoma kusuka kukho Izincwadi Zamanje:
"Usilika" de U-Alessandro Baricco: Incwadi emfushane kakhulu enamakhasi ayi-115 futhi okufundwa kwayo kulula kakhulu. Inolimi olunembile, ayikho into elayishwe imininingwane, futhi ukufundwa kwayo kuyajabulisa kakhulu futhi kuyabekezeleleka. Inenkokhiso enkulu engokomzwelo nomphumela omangalisa kakhulu. Ngokwami, ngiqhathanisa lo msebenzi naleyo mininingwane emincane ebonakala ingabalulekile ekuqaleni kodwa kamuva ibe nenani elikhulu kumuntu owutholayo. Impela nonke niyakuqonda lokhu engikhuluma ngakho.
"Umlando Wokufa Okubikezelwe" de UGabriel García Márquez: Umsebenzi osemfashinini kakhulu okwamanje ngenxa yokushona kombhali wayo omkhulu (kwesinye isikhathi siyabona ubukhulu babantu nezenzo zabo lapho bengasekho, yize lo msebenzi, ngenhlanhla yombhali wawo, ubehlala unokwamukelwa obekumfanele). Leli gugu elincane linamakhasi angaba ngu-106 futhi kungashiwo ukuthi ukufundwa kwalo "kucishe kuphoqeleke". Yayifakwe kuhlu lwamanoveli ayikhulu ahamba phambili ngeSpanish yekhulu lama-1951, futhi mhlawumbe kungenxa yaleli qiniso nje, kungaba lula ukuyifunda. Kugqugquzelwe umcimbi wangempela owenzeka ngo-XNUMX.
"Izimbali ezintathu eziphuzi" de URaymond Carver; Incwadi enamakhasi ayi-158 enezindaba eziyisithupha ezinhle. Izindikimba ezisemqoka umbhali azingenela kule ncwadi yilezi ezilandelayo: iMelika empofu, isizungu sezidalwa ezingaziwa eziphila ngokudabukisayo nezimpilo ze-anodyne zimiselwe ukwehluleka kwabahluliwe, izinkinga zomndeni nezomshado, imfihlakalo yempilo, njll. Incwadi ongayifunda ngombono othile wezemizwa njengoba ingaba "nzima" kakhulu ngezinye izikhathi.
"Umposi kaNeruda" de U-Antonio Skarmeta: Njengoba uhunyushelwe ezilimini ezingamashumi amabili nanhlanu, lo msebenzi waba incwadi yezinhlamvu ezivamile. Ifilimu esuselwe kuyena iqokelwe ama-Oscars amahlanu. Naphezu kwakho konke lokhu, ngokombono wami, ngicabanga ukuthi namuhla kuwumsebenzi okhohliwe ngandlela thile. Inamakhasi ali-139, ngakho-ke ihlangabezana nemfuneko emfushane yokufunda ngempelasonto, futhi uma singeza kulokho konke okushiwo ngenhla kanye neqiniso lokuthi isibongo sika "Neruda" sibhaliwe, ngicabanga ukuthi sinezizathu ezingaphezu kokwanele zokugcina iso kuso.
"INkosana encane" de Antoine de Saint-Exupery: Incwadi yabathandi bamanzi ajulile, kulabo abafuna ukudlula ubulula bezinhlamvu nemidwebo yezingane, kulabo abacabanga ukuthi "okubalulekile akubonakali emehlweni" ... Le ncwadi ihlangabezana nakho konke okudingekayo ukuze kufundwe ngempelasonto enhle : mfushane kakhulu ngoba inamakhasi angama-93 kuphela, ngeke ikushiye ungenandaba nekhasi ngalinye olifundayo, uzothola ukuthi izingoma zalo zifihleke kanjani futhi ngenhlanhla encane uzozizwa ujabulile ekugcineni.
Awusenazo izaba! Ukungabi nesikhathi ngeke kube yinkinga ukufunda le misebenzi emincane emangalisayo esincoma yona namhlanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Kufundwa okufishane ngempelasonto